ကွတ်ကျွန်းစု LLC side-by-Side နှိုင်းယှဉ် vs. နေးဗစ် LLC
ယင်းနေးဗစ် LLC နှင့်ကွတ်ကျွန်းစု LLC နှိုငျးယှဉျ
နောက်တဖန်တစ်ဦးကမ်းလွန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ထိရောက်သောပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတူရိယာဖြစ်အချိန်နှင့်သက်သေပြခဲ့သည်။ သင်တစ်ဦး LLC ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြေညာကြောင်းကိုသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလှည့်ပတ်နံရံတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးချင်းအဖြစ်သင်တို့တဘက်၌ယူဆောင်စေခြင်းငှါအနာဂတ်တရားစွဲမှုမှသူတို့ကိုကာကှယျစောငျ့ရှောကျကူညီပေးသည်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာအထူးသဖြစ်ကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်လုံခြုံဆိပ်ကိုဖန်တီးရန်ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ကြောင်းဥပဒေများရှိစဉ်ကတည်းကတစ်ဦးကမ်းလွန် LLC ထူထောင်သင်နှင့်သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်လုံခြုံရေးနီးပါးပိတ်ဆီးနေသောအလွှာပေးစကားပြောတစ်ဦးထုံးစံ၌၎င်းတို့၏ကမ်းခြေမှဆောင်ခဲ့ကြ၏။
အဆိုပါ ကွတ်ကျွန်း LLC နှင့် နေးဗစ် LLC နှစ်ခုရှိပါတယ် ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု မတော်မတရားတောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင်ခိုင်မာတဲ့အစီအမံပူဇော်ကြောင်းတူရိယာ။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပြဌာန်းခိုင်ခံ့စေ၏။ ကွတ်ကျွန်းဟာအတူ 2009 အတွက်ပြု ကွတ်ကျွန်းစုအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေနှင့်နေးဗစ်အဖြစ်ကောင်းစွာယင်း၏နှင့်အတူ နေးဗစ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ Ordinance (ပြင်ဆင်ချက်), 2015။ အဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့စည်းမှု, စစ်ဆင်ရေးသဘောတူညီချက်, နိုင်ငံခြားစီရင်တော်မူခြင်းသို့ဦးတည်ရပ်တည်ချက်များနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှု၏အဆငျ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အခြားတ LLC ခွဲခြားရန်အလွန်နည်းနည်းရှိသေး၏။ နှစ်ဦးစလုံးသည်နိုင်ငံ၏ယုံကြည်မှုနှင့် LLC ဥပဒေပြဌာန်းဖို့နောက်ဆုံးပေါ်တည်းဖြတ်မူများကိုနီးကပ်စွာလက်ရှိအချိန်တွင်ပျံ့နှံ့နေတဲ့စီးပွားရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာပတ်ဝန်းကျင်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ထင်ဟပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အမိန့်ကန့်သတ် charging မှကြွလာသောအခါတစ်ကွတ်ကျွန်းစု LLC နှင့်နေးဗစ် LLC တို့အကြားအသေးအဖှဲကွဲပြားခြားနားမှုသို့သော်နှစ်ဦးစလုံးတိကျတဲ့နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်-စကားလုံးရှိသည်, ရှိပါတယ် ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပြဌာန်း သူတို့တင်းကြပ်စွာပြဌာန်းထားပါသည်။
ကွတ်ကျွန်းစု LLC vs. နေးဗစ် LLC - အသင်းဝင်
နှစ်ဦးစလုံးနေရာများတွင် single-အဖွဲ့ဝင် LLC ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းခွင့်ပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, မ၎င်းတို့၏ဖော်ရွေကမ်းခြေပေါ်တွင်ထူထောင်ထားတဲ့ LLC ပါဝင်စေခြင်းငှါအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်အပေါ်ကန့်သတ်ပြဌာန်း။ ကွတ်ကျွန်းနှင့်နေးဗစ် LLC ပိုင်ရှင်တွေပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ LLC သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ပုံမှန်သင်တန်းခံရစေခြင်းငှါမဆိုအကြွေးတွေသို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ထိုက်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ LLC ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတှငျပါဝငျနိုငျသညျ။ သူတို့ကအစသူတို့လည်ပတ်ရှိရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အထူးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူ non-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကစီမံခန့်ခွဲ LLC သည်ရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး LLC ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုအင်္ဂါရပ်မြှင့်တင်ရန်, က LLC သည်ကွတ်ခ်ကျွန်းသို့မဟုတ်နေးဗစ်ဖြစ်စေ၏နေထိုင်သူတစ်ဦးသောသူသည် non-အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားဒါရိုက်တာ, ဒီဥပမာအရ, တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ယုံကြည်မှုသို့မဟုတ် LLC မန်နေဂျာကစီမံခန့်ခွဲကြောင်းအကြံပြုနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကနိုင်ငံခြား LLC မန်နေဂျာတစ်ဦးရဲ့အိမျနိုင်ငံ၏ဥပဒေများမှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ထိုကြောင့်, LLC သည်အတည်တကျနေထိုင်ရာမြို့ရွာသည်အဘယ်မှာရှိ မှလွဲ. အခြားမည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲကနေလာမယ့်တရားရုံးအမိန့်ကိုလိုက်နာမှတရားဝင်တာဝန်မရှိပါ။ ဒါကတစ်ဦးအပိုဆောင်းပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတိုင်းအတာအဖြစ်နှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက် LLC အဖွဲ့ဝင်များမှရရှိနိုင်သည့် option တစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်တရားဝင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့တစ်ခု LLC ဘို့မလိုအပ်ပါ။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Operating Agreement ကို
တစ်ကွတ်ကျွန်း LLC ၏ဖွဲ့စည်းပုံအလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပြီးဒီအဖြစ်ကောင်းစွာတစ်နေးဗစ် LLC များအတွက်စစ်မှန်တဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Operating Agreement ကိုအဖွဲ့ဝင် (နေသမျှကာလပတ်လုံးဤအဥပဒေရေးရာများမှာကဲ့သို့) တို့ပါဝင်သည်ရန်ဆန္ဒရှိသည်ဟုမဆိုကငျြ့ကုဒ်အမျိုးအစား, အဖွဲ့ဝင်တာဝန်များကို, ဒါမှမဟုတ်စည်းမျဉ်းများပါဝင်သည်အဖြစ်သူတို့အထူးအထဲကထွက်သွားဖို့ပိုနှစ်သက်သူတွေကိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီ၏တည်နေရာအဖွဲ့ဝင်များ၏ကာကွယ်မှုများအတွက်ချမှတ်ထားသည်ဟုအချို့သောပြဌာန်းချက်ပြဌာန်းချက်ရှိပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်ဥပဒေရေးရာနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာအဖွဲ့ဝင်သူတို့ကပထမဦးဆုံးအရာဌာန၌ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဘို့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီဝတ်ပြုဖို့ LLC တညျဆောကျပုံနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဖြစ်စေတည်နေရာအတွက် LLC ကိုတည်ထောင်နှင့် operating ၏လွယ်ကူခြင်းမှကထပ်ပြောသည်။
privacy ကို - ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတစ်ခုထိရောက်သောတူရိယာဖြစ်ခြင်းအပြင်, တစ်ဦးကမ်းလွန် LLC အဖွဲ့ဝင်များဤ (ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအပေါ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်) ပို. ပို. ကြိုးကမ္ဘာကြီးအတွက်အလွန်အမင်း-တန်ဖိုးကြီး '' ကုန်စည် '' ပေးသည်။ တစ်နာဗိစ် LLC ထူထောင် အဖွဲ့ဝင်အမည်များမဟုတ်သလိုသူတို့ကိုအကြောင်းကိုအခြားမည်သည့်အချက်အလက်များ၏အများပြည်သူပုံစံတင်ပို့ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်. အနာဂတ်ပြောင်းလဲမှုများမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်မှတဆင့်ကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။ တူညီတဲ့အဘို့အမှန် တစ်ကွတ်ကျွန်း LLC ထူထောင်။ အဖွဲ့ဝင်များတခုခုဖြစ်နေတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့စိစစ်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏ LLCs (တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုယ်သူတို့သို့မဟုတ်ကြားခံမှတဆင့်ရှိမရှိ) ကို run ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
privacy ကိုဒီစောင်ကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အိမျတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာကြွေးရှင်တရားဝင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ကမ်းလွန် LLC အပြင်ဘက်နှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထဲကရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုအလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ အဖွဲ့ဝင်များဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ကမှတ်တမ်းများလုံခြုံမှုအရှိဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်စစ်ကြောစီရင်တော်မူရာအရပ်ကမ္ဘာကြီး၌မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ကိုမတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အကောင့်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းများနှစ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်းလိုအပ်သည်။ သက်တမ်းတိုးကျွန်းများပေါ်တွင် LLC ရဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်များကကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။ အနည်ထိုင်ဖို့နဲ့တစ်ဦးကိုရိပ်မိကြွေးမြီ - ဤအကြီးအကျယ်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကမ်ဘာပျေါတှငျကြောင့်တခါတရံတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာကိုပဲအင်တာနက်ကိုသုံးစွဲနိုင်သူအကြောင်းကိုမည်သူမဆိုကွာထုတ်ဖော်နေ mouse ကိုတစ်ဦးမျှသာကလစ်ကြောင်းထင်ရပေမည်။ တစ်ခုခုကိုကျွန်းပရဒိသုတစ်ခုကမ်းလွန် LLC နှင့်အတူသငျသညျမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နောက်လိုက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ရဲ့ privacy ကိုတစ်ဦးအဆင့်ကိုရရှိ, ခြေရာကောက်ရန်မည်သူမဆိုများအတွက်အလွယ်တကူသိသာဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာများချန်မထားကြဘူး။
ကွတ်ကျွန်းနှင့်နေးဗစ်အခြေခံအားဖြင့်စနစ်တကျ၎င်းတို့၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကာ LLC ဆန့်ကျင်ပြန်လည်ကုစား၏တစ်ဦးတည်းသာအပျသညျဟု Avenue အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်နှစ်နိုင်ငံစလုံးတင်းကြပ်စွာက LLC မြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် '' Collection '' တစ်ကြွေးရှင်ခွင့်ပြုရာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်၏ကန့်သတ်မှုနှင့်နယ်ပယ်သတ်မှတ်။
ရှိလျှင် - ပထမဦးစွာအားသွင်းနိုင်ရန်သာပုံမှန်အားဖြင့်ကြောင်းမြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှဖြန့်ဝေခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားရာခိုင်နှုန်းကိုဖုံးလွှမ်း။ ဒါဟာ LLC ၏အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမဟုတ်သလိုအခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါဖြန့်ဝေမထိခိုက်ပါဘူး။
ဒုတိယအချက်မှာတစ်ဦးမြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်နေတဲ့အားသွင်းနိုင်ရန်နှင့်အတူတစ်ကြွေးရှင် LLC သည်အတွက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အနေအထားကိုယူဆမဟုတ်သလိုတစုံတမျိုးအတွက် LLC ၏ပြေးနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်လို့မရပါဘူး။ တကယ်တော့တစ်ဦးမြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဟာကြွေးရှင်ကနေဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ LLC သည်စည်းမျဉ်းများကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်တာဝန်များထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဆက်လက်နိုငျသညျ, သျောလညျးအမိန့်အားသွင်း။ တစ်ဦးကအားသွင်းနိုင်ရန်တစ်ကြွေးရှင်ဆိုကျော်ပါဝါသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းပြီးသို့မဟုတ်သိမ်းယူထားတဲ့ LLC ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏တစ်ဦးကြွေးမြီကျေနပ်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်တစုံတမျိုးအတွက် LLC ၏စီးပွားရေးကန့်သတ်ရန်ခွင့်ပေးမထားဘူး။ LLC သည်နဂိုအတိုင်းက၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတူအလုပ်လုပ်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်နှင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်များဖို့ဖြန့်ဝေထိခိုက်။
တတိယအချက်နှစ်နိုင်ငံစလုံးပြင်းထန်စွာယင်းမြီစား-အဖွဲ့ဝင်များကအကြွေးကြောင်းအမှန်တကယ်ငွေပမာဏတစ်ခုအားသွင်းနိုင်ရန်ကန့်သတ်။ ပြစ်ဒဏ်ခတ်, retributory, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်စံထားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုခွင့်မရှိကြပေ။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းခုနှစ်တွင်တစ်ဦးနေးဗစ် LLC ကြောင်းတစ်ကွတ်ကျွန်းစု LLC ကျော်အနည်းငယ်အားသာချက်ရှိပါတယ် နေးဗစ် LLC ဥပဒေပြဌာန်း အမိန့်အားသွင်းပေါ်မှာတင်းကျပ်သုံးနှစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးန့်သတ်ချက်ထား။ ယခု ကွတ်ကျွန်းစု LLC ဥပဒေများ အမိန့်အားသွင်း၏ထိရောက်မှုအပေါ်ငါးနှစ်တစ်ကန့်သတ်ရှိသည်။
နေးဗစ် LLC: အမိန့်အားသွင်းပေါ်မှာသုံးနှစ်ကြာသက်တမ်းကုန်ဆုံး
ကွတ်ကျွန်းစု LLC: အမိန့်အားသွင်းရက်နေ့တွင်ငါးနှစ်ကြာသက်တမ်းကုန်ဆုံး
နေးဗစ်နှင့်ကွတ်ကျွန်းစုနှစ်ခုလုံးကိုအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ကွက်တိနှင့် - ကဲ့သို့သော, သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသူတို့ကတခြားနိုင်ငံတွေ၏ဥပဒေများအထက်တွင်ကိုင်ကြောင်း LLCs အုပ်ချုပ်ခွင့်စည်းမျဉ်းများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစုံရှိသည်။ ကိုမငျးပွညျအလိုအလျှောက်တစ်ဦးမြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်နေတဲ့နိုင်ငံခြားတရားရုံးကထုတ်ပေးတဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ပြဋ္ဌာန်းရန်ပါလိမ့်မယ်။ နေးဗစ်ဥပဒေများဟာကြွေးရှင်တစ်ဦးနေးဗစ်တရားရုံးတစ်ဦးမြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားစွဲဆိုမှု mount ရမည်ဟု dictate ။ နေးဗစ် LLC စည်းမျဉ်းများ မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတခုနေးဗစ် LLC ၏မြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်ယူဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှေ့မှာမနာဗိစ်တရားရုံး $ 100,000 (EC) ၏ပေါင်းလဒ်ဆပ်ဖို့အကြွေးလိုအပ်သည်။ တရားရုံးတစ်စုံစမ်းရာစတင်မှာလုပ်ခံရဖို့တစျခုအတှကျတောငျးဆိုနိုင်ပေမယ့်ကွတ်ကျွန်းအလားတူသိုက်ဥပဒေပြဌာန်းထားသည်ပါဘူး။
နေးဗစ် LLC: ကြွေးရှင်တစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုအစပျိုးရန် $ 100,000 တရားရုံးသိုက်ပေးဆောင်ရပါမည်။
ကွတ်ကျွန်းစု LLC: တစ်တရားစွဲဆိုမှုစတင်ရန်အခွင့်အာဏာကိုမအပ်ငွေ။
နေးဗစ်နှင့်ကွတ်ကျွန်းစုများကလွယ်ကူအဖွဲ့ဝင်များသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သည့်နိုင်ငံကမှသို့မဟုတ်နီးပါးကနေသူတို့ရဲ့တည်ဆဲ LLC လွှဲပြောင်းရန်အဘို့အစေ။ အထူးသဖြင့်ကွတ်ကျွန်းစုမှာ, ကြာအပေါငျးတို့သကျွန်းများမှ re-domicile နိုင်ငံခြား LLC မှရိုးရှင်းတဲ့လျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ကွတ်ကျွန်းစုများအေးဂျင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ LLC ရဲ့လက်မှတ်မိတ္တူနှင့်အဖွဲ့အစည်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူလျှောက်လွှာပုံစံကိုပြီးဆုံးနှင့်မှတ်ပုံတင်သူတို့ကိုတင်ပြ။ လက်ခံမှုအပေါ်မှာ၎င်း, LLC သည်ခိုင်လုံသောဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင့်မူလကအခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှာ set up ခဲ့သည်ရက်စွဲထံမှကျွန်းများပေါ်တွင်ယင်း၏တည်ရှိမှုကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နေးဗစ်ဌာန၌တစ်ဦးအညီအမျှရိုးရှင်း LLC ရွှေ့ပြောင်းစည်းမျဉ်းရှိပါတယ်။
ဒါဟာအကြွေးတွေနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောသွားသည့်အခါ LLC ရွှေ့ပြောင်း ပတ်သက်. နေးဗစ်နှင့်ကွတ်ကျွန်းစုဥပဒေပြဌာန်း၏အသုံးအနှုန်းအလွန်တိကျတဲ့ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကြောင့်သွားလေရာရာ၌တစ်ဦး LLC က (သူကဆန့်ကျင်မည်သည့်တရားသဖြင့်စီရင်အပါအဝင်) အားလုံးအကြွေးတွေသို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားကြာပါသည်။ ကျွန်းများ dutifully စနစ်တကျနေးဗစ်နှင့်ကွတ်ကျွန်းစုဥပဒေများနှင့်အညီဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမဆို LLC ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်နေစဉ်, သူတို့တကာအနေနဲ့အတည်ပြုတရားစီရင်ခြင်းကိုဘေးဖယ်ထားမည်မဟုတ် ရှိပြီးသားတည်ဆဲ ကျွန်းများမှ၎င်း၏ရွှေ့ပြောင်း၏အချိန်မှာ LLC ဆန့်ကျင်။ တည်ဆဲကုမ္ပဏီပြီးသားဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များရှိပါတယ်လျှင်ဒီတော့အသစ်တစ်ခုကိုနေးဗစ်သို့မဟုတ်ကွတ်ကျွန်းစု LLC ဖွဲ့စည်းကြောင်းစသည့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းပိုကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ဥပဒေပြုဖို့ထောက်ခံချက်: အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုလူဝင်မှု LLCs ကြိုတင်တာဝန်ယူမှုကိုသွန်းကြောင်းနေးဗစ်ဒါမှမဟုတ်ကွတ်ကျွန်းစုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့ကြသည်လျှင်, ချိန်သီးတစ်ခုကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏မျက်နှာသာအတွက်ကျယ်ပြန့်လွှဲနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, ကွတ်ခ်ကျွန်းစုတွင်သို့မဟုတ်နေးဗစ်အတွက် LLC တည်ထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုယူရပါလိမ့်မယ်။ တဦးတည်း (ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြည့်စုံသော) တစ်ဦးချင်းစီနိုင်ငံ၏တည်ဆဲ LLC ဥပဒေများထည့်သွင်းစဉ်းစားပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုသကဲ့သို့သငျမှရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတူရိယာ, သငျ့သညျသာ။ သူတို့ရဲ့ကောင်းစွာ-လေးစား LLC အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအပြင်, အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာအသီးအသီးအခြားတရားစီရင်မှုထက်သာလွန်ဖြစ်ကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယုံကြည်မှုအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုဝင်စား။
တစ်ခုခုကိုနိုင်ငံတွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတစ်ခု LLC ခြွင်းချက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထုံးအဖွဲ့တို့နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်သဘောတူညီချက်များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမှတဆင့်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များကဆန့်ကျင်တခုခုဖြစ်နေတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့တောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏နှိုင်းယှဉ်အဆင့်ဆင့်ပေးထားပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နှစ်ဦးစလုံးဒေသများတွင်လွတ်လပ်သော, အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပထမဦးဆုံးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများ၏ veracity ဖို့ကိစ္စအောက်မပါဘဲအလိုအလြောကျနိုင်ငံခြားတရားစီရင်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းမ LLC အဖွဲ့ဝင်များမှထပ်မံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဆက်ကပ်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးစနစ်တကျ၎င်းတို့၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကာ LLC ၏မြီစား-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်မှသာပြန်လည်ကုစားအဖြစ်အားသွင်းနိုင်ရန်လက်ခံပါ။ ထိုမှတပါး, နှစ်ဦးစလုံးမှာလည်းပြင်းထန်စွာတစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်၏အတိုင်းအတာကန့်သတ်။ နေးဗစ်ဟာကွတ်ကျွန်းစုများ (ငါးနှစ်) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (သုံးနှစ်က) တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်ထိရောက်သောဖြစ်စဉ်းစားမည်သည့်အခါအချိန်အနည်းငယ်တိုတောင်းကာလရှိပါတယ်။
ပြောသူကလောက်, နှစ်ဦးစလုံးကမ်းလွန်နေရာများတွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြည့်စုံသည် ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများ LLC ပိုင်ရှင်များနှင့်နေရာတိုင်းအဖွဲ့ဝင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၏စုပေါင်းသက်ပြင်းချတာ - ကြောင့်တင်းကြပ်စွာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်မှုအတွက်ပြဌာန်းထားပါသည်။ LLC ဥပဒေများအဆက်မပြတ်ဒီအရေးအသား၏အဖြစ်, တိုးတက်အောင်နေကြသည်သွားရမည်အကြောင်း, ထိုနာဗိစ် LLC သည်ကွတ်ခ်ကျွန်းစု LLC ကျော်အနည်းငယ်အားသာချက်ရှိပါတယ်။